Nagarik News - अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई भने- आमाको दूध खाएर आमालाई नसराप्नोस्
22 May 2013 | 13:10pm
काठमाडौं — अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले स्वरोजगार कोष सञ्चालक बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आमाको दूध खाएर आमालाई सराप्ने काम नगर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। कोषप्रति सर्वसाधारणको नकारात्मक धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै गतिविधि पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिए।
कोषबाट ऋण लिने व्यक्तिको तीन पुस्ते र सहकारी संस्थाहरुको पृष्ठभूमि वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिँदै कोइरालाले कोषको पाँच वर्षे गतिविधिको समीक्षा गर्ने बेला आएको उल्लेख गरे। 'बैंकर्सहरुको दादागिरीबाट कोषलाई मुक्त पार्नुपर्छ', उनले भने 'आगामी दिनमा कोषले गर्ने कामको रोडम्याप लिएर आउनुस् , म जस्तो पनि सहयोग गर्न तयार छु।'
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले कोषको पैसा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाहबाट मुक्त हुनु कोष पदाधिकारीलाई सुझाव दिए। अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले एक वर्षमा ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यबाट शुरु भएको कोष बीचमै अलमलिएकाले यसलाई गतिशिल बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान प्रधानले अरबौं लगानी गर्ने संस्था राजनीतिक नियुक्तिमा नभएर वित्तिय संस्थाको कार्यशैलीमा चल्नुपर्ने बताए। कोषका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी र कार्यकारी निर्देशक विनोद गुरागाईंले सहकारीको माध्यमबाट गाउँ पैसा पुर्‍याउन सफल भएको दाबी गरे।